Dhammaan wixii ku saabsan foox iyo Pokémon Go modules | Wararka IPhone
Pokémon Go wuxuu leeyahay walxo badan oo noo oggolaan doona inaan ugaarsano Pokémon si dhakhso leh oo fudud, walxahaas waxaa ka mid ah udugga iyo qaybaha PokeStop. Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato fooxa iyo qaybaha Pokeparadas ee Pokémon GoSidan ayaad uga faa'iideysan doontaa walxahaan ay ciyaartu ku rido farahayaga taasna waxay noo oggolaan kartaa inaan ka faa'iideysanno daqiiqad kasta oo aan codsi u furan nahay, annagoo leh waayo-aragnimada sii kordheysa iyo keydinta bateriga ee ay tani tilmaamayso. Nasiib darrose ma aha laba shay oo badan, wayna adag tahay in la helo.
2 Qalabka Pokeparada
Fooxu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan uguna faa iidada badan Pokémon Go, nasiib daro kama heli doonno PokeStop, ugu yaraan si joogto ah uma helin, badanaa waxaan helnaa marka aan ku hormarno heerka ama marka aan ku iibsanno Pokecoins ( lacagta dhabta ah). Fooxa ayaa soo jiidan doona Pokémon oo ah booskeena, taas oo noo ogolaaneysa inaan qabsanno iyaga oo aan dhib badan qabin. Tani way fiicantahay markaan joogno meel leh hal ama dhowr Pokémon oo aanan wali qabsan waxaana rabnaa inaan kudarno Pokedex.
Fooxu wuxuu soo jiidan doonaa Pokémon booskeena haddii aan taaganahay ama dhaqaaq nahay. Xaaladda ahaansho istaagida ayaa soo jiidan doonta Pokémon shantii daqiiqo ee kasta ama wixii la mid ah. Xaaladda ahaansho dhaqdhaqaaqa waxaan awoodi doonnaa inaan aragno Pokémon cusub daqiiqad kasta ama ugu yaraan 200 mitir kasta oo aan soo safarnay. Habkan, ciyaarta ayaa ka faa'iideysan doonta kuwa badan oo raadinaya Pokémon. Fooxu wuxuu socdaa wadarta 30 daqiiqo.
Qaybtani waxay xoogaa la mid yihiin udugga, oo leh farqiga u ah in lagu meeleyn karo oo keliya PokeStops. Si aan u dhigno waxaan gujin doonnaa jaakadda cad ee ka koreysa giraangirta joogsi kaftan ah, iyo qaybahayaga la heli karo ayaa soo muuqan doona. Tani waxay soo jiidan doontaa dhammaan Pokémon aagga, laakiin maahan oo keliya mulkiilaha moduleka, laakiin isticmaale kasta oo raba inuu u dhowaado.
Qeybaha Pokeparada ayaa u gaar ah kulamada saaxiibada ee Pokeparadas, iyo sida fooxa oo kale wadarta nus saac. Sida xogta saxda ah ee muuqaalka, annagu ma hayno, maxaa yeelay mararka qaarkood illaa saddex ama afar Pokémon ayaa mar wada muuqda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Dhammaan wixii ku saabsan foox iyo Pokémon Go modules
Aynu dib ugu noqonno sanadka 2016. Mahadsanid berrito waxaan bilaabi doonnaa ciyaaro tazos iyo ka dib si aan u aragno masduulaaga
Usha ka bixi dameerkaaga saaxiib. Waxaan kuu xaqiijinayaa inaad si fiican u nooshahay.
Tazos wali way jirtaa oo Dragon Ball wuxuu leeyahay taxane cusub oo hawada ah… Waxay ila tahay inaan joogno 2016!
Kaalay si fiican u aad barxadda iskuulka si aad ugu ciyaarto garabka marmar
Shaqaalahii hore ee Apple waxay keeneen dharka wasakhda ah